Maxaa keenay in DF ay dayacdo ammaanka wasiirada iyo xildhibaanada? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa keenay in DF ay dayacdo ammaanka wasiirada iyo xildhibaanada?
Maxaa keenay in DF ay dayacdo ammaanka wasiirada iyo xildhibaanada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Qubaro dhinaca ammaanka iyo xubno xilal horay u soo qabtay ayaa su’aal ka keenaya sida xilligan u dayacan yihiin qaar ka mid ah ammaanka Wasiirada Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Baaritaano horudhac ah ayaa lagu ogaaday in 40% ay Wasiirada Xukuumadda uu amnigooda dayacan yahay, kuwaas oo aan laheyn ilaalo iyo gaadiid aan xabadaha karin.
Sidoo kale waxaa dayac uu ka muuqdaa ammaanka xubnaha Xildhibaanada qaarkood oo gaadiidka ay wataan gacmahooda ku wata, iyaga oo aanan la socon haba yaraate Askari qura.
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qiraya dayaca amni ee haysta masuuliyiinta Dowladda.
W/D:- Feysal C/laahi Maxamuud